यी क्यानाडा मुद्रा विनिमय सुझाव पैसा बचत
पर्यटक अक्सर क्यानाडा मुद्रा विनिमय व्यापार, जो एक दैनिक गतिविधि छ. विश्व भरि, विभिन्न विदेशी मुद्राहरू को स्कोर हो. केही क्यानाडा मुद्रा विनिमय सुझाव सिक्ने तपाईं आफ्नो खर्च को सबै भन्दा बनाउन मदत गर्न सक्छ.
तल हामी जहाँ तपाईं राम्रो व्यापार गर्न सक्छ ठ्याक्कै केही प्राथमिक स्थानहरू सूची हुनेछ. हामी पनि प्रस्ताव मुद्रा विनिमय यी विधिहरू देखि खडा गर्न सक्छ भन्ने केही समस्या को तपाईंलाई सल्लाह हुनेछ.
विमान वाहक – यो विमानस्थलको मा, यात्री डेस्क पैसा परिवर्तन को लागि स्थापित छन्. विनिमय दर शामिल, जो अक्सर अन्य विनिमय प्रदायकहरू भन्दा उच्च छन्. सबैभन्दा विमानस्थलको उच्च दर चार्ज, जो तपाईंले धेरै खर्च हुन सक्छ 20% योगफल को कारोबार. यी यात्री लागि सुविधाजनक ठाउँ हुन्. यो लेनदेन गर्न सामान्यतया सहज छ र पनि क्षेत्र सजिला छ. मामला मा तपाईं उच्च मूल्य तिर्ने आपत्ति छैन, विमानस्थलमा विनिमय मुद्राहरू एक क्षेत्र हो.
सामुदायिक बैंक संस्थाहरू – बैंकर्स क्यानाडा मुद्रा विनिमय सेवाहरू प्रदान. सबैभन्दा बैंक विमानस्थलको भन्दा धेरै राम्रो दर प्रस्ताव. सबैभन्दा बैंक मुख्यतया व्यापार मूल्य आधारित शुल्क चार्ज. एक बैंकिङ्ग संस्थाहरू संग काम को जटिलताहरुलाई, तैपनि, सञ्चालनको घन्टा. यो सम्भव छ मात्र खुला घण्टाको ट्रेडों बनाउन. अर्को समस्या छ कि वित्तीय संस्थाहरू ठूलो रकम मा मुद्रा आदानप्रदान प्रस्ताव गर्ने स्थितिमा नहुन सक्छ छ.
डेबिट र क्रेडिट कार्ड – डेबिट र क्रेडिट कार्ड तपाईं विदेशी मुद्राहरू स्वाप गर्न तेज बाटो दिन. सामान्यतया विनिमय दर प्रतिस्पर्धी हुन्, र तपाईं विनिमय सेवाहरू कुनै पनि समयमा प्राप्त गर्न सक्षम. पर्यटक गर्न आवश्यक, तर, तिनीहरूले सुरक्षा निष्क्रिय छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न आफ्नो कार्ड प्रयोग बनाउन विदेश vacationing गरिने तिनीहरूलाई बताउन आफ्नो क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड कम्पनी संग सम्पर्क बनाउन.
एटीएम तपाईं पैसा आदान प्रदान गर्न सरल तरिका प्रदान. आफ्नो क्षेत्र बाहिर एटीएम प्रयोग अवस्थित सक्छ कि शुल्क बारेमा तपाईंको बैंक संग कुरा.
यसरी, तपाईं यस्तो एयरलाइन्स रूपमा मुद्राहरू स्वाप गर्न धेरै विधिहरू सक्छ, बैंकिङ्ग संस्थाहरू, क्रेडिट र पनि डेबिट कार्ड, र एटीएम. यी प्रयोग सबैभन्दा व्यापक समाधान गर्दै छन्. वेब मा तैपनि, तपाईं मुद्रा विनिमय सुझाव देखि क्यानेडियन डलर स्वाप गर्न थप तरिकाहरू फेला गर्न मार्गदर्शन गर्ने लिंक पत्ता लगाउन सक्छ.
बैंकमा मुद्राहरू साटासाट मार्फत, तपाईं गर्दा एक कोषाध्यक्ष अगाडि प्रकारका भर्न र हरेक चेक साइन इन. तपाईं चेक राख्न सक्नुहुन्छ, र एक हुन्छ भने गलत गर्न, यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ.